Alaaabaan ABO,Alaabaan Ummata Oromoo, Alaabaan Lammilee Oromiyaa, – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAlaaabaan ABO,Alaabaan Ummata Oromoo, Alaabaan Lammilee Oromiyaa,
Alaaabaan ABO,Alaabaan Ummata Oromoo, Alaabaan Lammilee Oromiyaa,
Alaaabaan ABO,Alaabaan Ummata Oromoo, Alaabaan Lammilee Oromiyaa, Alaabaan Biyyaa, Alaabaan
Oromiyaa, Alaabaa Dhiigaa fi Lafee Gootota Wareegamtoota ilmaan sabaatiin tikfamee as gahe Faajjii Qabsoo Bilisummaa Oromoo(QBO)ti! Faajjiin QBO mallattoo waraqaa fi huccuu irratti qalamaan tolfame osoo hin taane, eenyummaa ummata Oromoo/ Lammiilee Biyyaa kan dhiigaa fi lafee goototaatiin ijaarame riqicha Bilisummaa fi Walabummaati.
Alaabaan biyyaa kun, Alaabaa Magariisni Dacheen Oromiyaa keessaan hanga’u, Alabaa Bakkalchi Bilisummaa OROMOO fi Walabummaa OROMIYAA keessaan ifu eenyummaa Oromoo/lammiilee Oromiyaa kan dhiigaan barreeffameedha.
Alaabaan kun faajjii QBO dukkana gabrummaa keessaa ifa Bilisimmaatti bahuuf wareegamni hedduun itti bahaa as gahee dha.
Kanaafis Faaruu Alaabaa faarfatamuun,
“Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa
Guyyaa si dhaabbanne Gabrummaarraa baana
Kumni kimnillee du’u kan hafeen gadi si dhaabnaa
Falmaarraa hin deebinuu tarreerra dhaabbannaa…”
#Alaabaa Biyyaa faayidaa Adda Addaatiif Oolfachuu Dura, Kabajaa fi Ulfinna Inni Qabu Beekuun Murteessaa dha.
Alaabaan tuni Saba Oromootiif, Lammiilee Oromiyaa fi Firoottan QBO cufaaf Mallattoo Bilisummaa ti. Gootota ilmaan biyyaa kumaa-kitilatu Alaabaa tana jala hiriiree Bilisummaaf lubbuu ofii wareege, ammas wareegaa jira.
Alaabaa #Diimaa #Magariisa #Diimaa mallattoo isaa faanaa kabajaa fi Ulfina inni qabu osoo irraa hin buusin abbaan fedhe itti fayyadama isaa osoo hin jallisin dhimma itti bahuuf mirga qaba. Alaabaan kun alaabaa dhaabaa fi saba bira dabree Alaabaa lammiilee Biyyaa, lammiilee Oromiyaa waan ta’eef!
Garuu, Alaabaa kana jibbiinsaa fi bakka na hin bu’uun dhiibbaa fi dhiittaa gosa kamuu irra gahu irraa qolachuuf Lammiileen Oromiyaa dirqama qabu; Alaabichatuu dhiigaa fi lafee goototaatiin dhufe waan ta’eef.
Akka kanaan, rakkinnoota Alaabaa keennaan wal qabatanii bakkaa bakkatti mul’ataa jiraniin, erguma ABOn biyya kanatti seeraan galmaawee sochii karaa nagaa itti fufee as warra Alaabaa tana bakka fannifamtee buusee ciru, gubu, dhabamsiisuu fi sababa isiitiin lammiilee nagaatti roorrisu bakka hedduutti argaa fi dhagahaa jirra.
Alaabaa tana tuquun har’a Itoophiyaa keessatti osoo ol’aantummaan seeraa jiraatee adaba guddoo nama adabsiisa. Itoophiyaa keessatti Alaabaa tana gubuun/ciruun/bakka fannifamtee sirnaan ala humnaan gadi buusuun, itti qoosuun, sanaan nama doorsisuun, … kkf. (sanumaa ammoo qaamota mootummaa tahanii kana gochuun) mallattoo wallaalummaa, siyaasaadhaan mohatamuu, sirna-dhablummaa fi gocha gadigaloo ti.
Garuu kabajaa Alaabichaa osoo irraa hin buusin akkuma amma kuno Giifti duree tti callee Diimaa Magariisa Diimaa godhan kana eenyuuyyuu yoo dhimma itti bahe mirga isaati/isiiti.
Warri gocha fokkataa fi yakka tahe Alaabaa irratti ta’e jedhee dhaqqabsiisu dhugaa jiru beekee ofitti qaanfachuu fi gocha hamaa irraa dhaabbachuu qaba.
Ummatni Oromoo , Lammiileen Oromiyaa fi jaalattoonni biroos mirga seerri biyya kanaa isaaf kenne beekee akka fedhetti sodaa fi bir’aa tokko malee itti fayyadamuuf mirga guutuu qaba.